Narayan Gopal (नारायण गोपाल गुरुवाचार्य)
Topic: Narayan Gopal (नारायण गोपाल गुरुवाचार्य)
Author Topic: Narayan Gopal (नारायण गोपाल गुरुवाचार्य) (Read 14601 times)
« on: August 27, 2009, 12:02:30 AM »
नारायण गोपाल गुरुवाचार्य
स्वरसम्राट् नारायणगोपाल गुरुबाचार्यको जन्म वि.सं. १९९६ असोज १८ गते बुबा आशागोपाल गुरुबाचार्य र आमा रामदेवी गुरुबाचार्यको सन्तानका रूपमा काठमाडौँ किलागलमा भएको हो । वि.सं. २०२७ साल फागुनमा पेमालाका साथ उहाँको विवाह सम्पन्न भए पनि सन्तान भएनन् । चार जना दाजु-भाइ र ३ जना दिदी-बहिनीमध्येका एक नारायण गोपालले मानविकीमा स्नातकोत्तर गर्नुभयो । बडोदा (भारत) मा शास्त्रीय संगीतको अध्ययन थालेर पूरा नगर्दै छाड्नुभयो । डिस्क र टेप गरी जम्मा २ सयवटा प्रसारित गीत गाएका नारायण गोपालले २०२३ सालमा सर्वोत्तम संगीतकार (रेडियो नेपाल), २०२४ सालमा सर्वोत्तम गायक (रेडियो नेपाल), २०३९ सालमा रत्न रेकर्ड पुरस्कार, २०३३ सालमा गोरखा दक्षिण बाहु चौथो, २०४० सालमा इन्द्रराज्यलक्ष्मी पज्ञा पुरस्कार, २०४३ सालमा लायन्स अवार्ड, २०४४ सालमा छिन्नलता पुरस्कार, २०४५ सालमा जगदम्बाश्री पुरस्कार, २०४७ सालमा उर्वशी रङ पुरस्कार र २०४८ सालमा त्रिशक्तिपट्ट तेस्रो (मरणोपरान्त) जस्ता पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभयो । खाना बनाउने, चेस खेल्ने चंगा उडाउने, फुटबल म्याच हेर्ने, टेबुल (विशेष गरी कोठाको) अगाडि पर्‍यो कि बजाउन थालिहाल्ने खालको उहाँको बानी र शौख थिए । बागीनाको प्रकाशक तथा संस्कृतिक संस्थानका महाप्रबन्धक, सञ्चार मन्त्रालयमा सल्लाहकारसमेत हुनुभएका नारायण गोपालले गीति नाटकको कथा 'कान्छी मस्याङ' लेखनुभएको थियो । उहाँको निधन वि.सं. २०४७ साल मंसिर १९ गते भयो ।
Re: Narayan Gopal (नारायण गोपाल गुरुवाचार्य)
« Reply #1 on: December 05, 2011, 10:10:34 AM »
Even after his death 20 years ago, Nepali modern music and singing still misses the voice and music of Narayan Gopal.
Narayan Gopal died on December5of 1990 (19 Mangsir, 2047 B.S.) at9p.m. in Bir Hospital Kathmandu, at an age of fifty-one. He was suffering from diabetes but wouldn't follow strict dietary rules.
After his death, no other Nepali singer has been suchaversatile singer. Narayan Gopal was also the first generation of Nepali singers who took music asaprofession. Wide range of his voice range allowed him to sing songs of every genre of Nepali music.
« Reply #2 on: December 06, 2015, 03:37:38 PM »
नारायणगोपालको भद्रगोल तबला
२०७१ मङ्शिर २० शनिबार
२०१९ सालमा रेडियो नेपालले आयोजना गरेको लोकगीत प्रतियोगितामा ओखलढुंगाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै रायन र म आयौं। लोकगीत सम्मेलन सम्पन्न भइसकेपछि रेडियो नेपालले बालाजुमा बिदाइ पार्टी आयोजना गरेको थियो। त्यहीँ नारायणगोपाललाई मैले पहिलोपल्ट देखेँ। त्यो बेला उनका गीतहरू रेकर्ड भएर श्रोतामाझ आइसकेको थिएन।
हामीले पनि उनको गीत नसुनेकाले त्यति मतलब राखेनौं। तर रेडियोका वाद्यवादकहरू भन्थे, 'स्वर त निकै राम्रो छ। चाँडै कलकत्तामा रेकर्ड भएर उसको गीत बजारमा आउँदैछ।' नभन्दै ओखलढुंगा फर्केपछि रेडियोबाट उनको स्वरमा गीतहरू सुनियो- 'स्वर्गकी रानी, मायाकी खानी', 'भो भो नसोध अब के मलाई', 'ए कान्छा ठट्ट्रैमा यो बैंस जान लाग्यो'। स्वर मस्त र मादक थियो।
गोपाल योञ्‍जन र नारायणगोपाल पारिजात दिदीकहाँ आउँदा उनीहरुको मितेरी जीवनका झाकीझलक नजिकैबाट हेर्ने र सुन्‍ने अवसर मिल्‍थ्‍यो। अहा ! कति वजनदार,कति गहकिलो मित्रता! क्‍या उल्‍लास! चुटकिलाका वर्षा! रमाइला, फर्स्‍याइला, रंगिला मान्‍छेहरु! उनीहरुले नजानेको क्‍यै छैनजस्तो। किहलेकाही त लाग्‍थ्‍यो, यिनै रहरलाग्‍दा उम्‍दा कलाकारहरुसँग जीवनभरि सँगै रहन पाए जीवन कति सार्थक र सुखद हुँदो हो !
गाउँमा शिक्षक थिएँ। दिक्तेल जिल्ला, बुइपाभन्दा तल खाम्तेल गाउँमा। एउटा सानो ट्रान्जिस्टर साथी थियो। ठाउँ पर्‍यो त्यस्तै- रेडियो नेपाल टिप्नै नमान्ने... कोप्चेरो। तर, रेडियो खर्साङचाहिँ दन्केर बज्ने।
खर्साङ रेडियो दिनदिनै सुन्दा दार्जिलिङका कलाकारसँग मेरो परिचय हुँदै गयो। सायद आठदसजनाको टिम थियो। शरण प्रधान, रञ्जित गजमेर, गोपाल योञ्जन, कर्म योञ्जन, अरुणा लामा, जितेन्द्र बर्देवा र अरू।
'छुइयामा हाहाहा, छुइयामा हा...
वर्ष दिनको आँसु खसाली
मन रुन्छ मेरो डाँडापारि'
पछि विस्तारै अरू गीतहरू पनि निरन्तर सुनिन थाले- 'यहाँ फूल नफुलेछ, बहार आउन नै भुलेछ', 'हेर न हेर कान्छा डाँडालाई फूलले ढाक्यो', 'जाउन फूलको देशमा', 'किन यो मन उदास छ मेरो'...। अम्बर गुरुङको 'नौ लाख तारा'को चर्चा पहाडतिर पनि चल्दै थियो।
खर्साङबाटै शान्ति ठटालका स्वरमा गीतहरू पनि सुन्न थालियो। यसरी एउटा गरिब गाउँमा दार्जिलिङका कलाकारसँग खरसाङ रेडियोबाट मेरो चिनजान अनि गीतिसम्बन्ध रहन पुग्यो।
नारायणगोपालको स्वरसँग दार्जिलिङ, कालिङपोङ पनि निकै प्रभावित रह्यो। उनलाई उताबाट निम्तो आइरहन थाल्यो। उनी बराबर उतै जान थाले। दार्जिलिङका गोपाल योञ्जन पनि उनको स्वरसँग निकै आकर्षित थिए।
आफूले रचना गरेका गीतसंगीतहरू उनको स्वरमा गवाउने चाहना राख्थे। साथीहरूले कुरा बुझे। त्यो उद्देश्य पूरा हुने गतिलो माध्यम मितेरी साइनो नै थियो। बाँधिदिए यी दुईलाई गाढा मितेरी साइनोमा।
नारायणगोपाल गुरुवाचार्य नेवार र गोपाल योञ्जन तामाङ जातिका थिए। तर, मित्रताले जात धर्म हेरेन। उनीहरूको मितेरी साइनोबाट नेपाली गीतिढुकुटी निकै सम्पन्न र समृद्ध भएको गीतसंगीत प्रेमीहरूले अनुभव गरे।
'तिम्रोजस्तो मुटु मेरो पनि...', 'मेरो गीत मेरो प्रतिविम्ब हैन', 'मेरो गीत म उभेको धुलोले सुनोस्', 'सबलाई रिझाऊँभन्दा पसलमा बेचिएछु', 'सारा दिन अरूलाई बाडेँ'जस्ता कैयौं गीत प्रचारप्रसारमा आउन थालेपछि प्रशंसकहरूले मुख खोले, 'क्या संगीत, क्या स्वर ! गीतहरू पनि कति स्तरीय र भावपूर्ण।'
२०१९ सालको रेडियो नेपालको लोकगीत सम्मेलनपछि हामी ओखलढुंगा घरतिर फर्केका थियौं। तर कलाकार हुने सपना बोकेर फेरि २०२१ सालतिर काठमाडौं झर्‍यौं। २०२३ सालसम्म करिब तीन वर्ष रेडियो नेपालमा लोकगीतहरू गाएपछि रेडियोसँगको सम्बन्ध टुट्यो।
रेडियो नेपालमा हाम्रो थोरै पारिश्रमिक पनि किर्ते गरेर खाइदिने भ्रष्टहरूको नाममा भ्रष्टाचारको मुद्दा सप्रमाण दर्ता गरायौं। भ्रष्टहरूले 'अब रेडियो नेपालमा गीत गाउन आउलास् भन्ने खबर पठाए।'
घर फर्कने तरखर गर्दागर्दै पारिजात दिदीले हामीसँग भेट्ने चाहना गर्नुभएको खबर आयो। रेडियोमा सुनिने हाम्रा पूर्वेली लोकगीतहरू उहाँलाई धेरै मन पर्दो रहेछ। भेटघाट विस्तारै बाक्लिएपछि दिदीलाई हामीले संकलन गरेका लोकगीत र आफैंले सिर्जना गरेका गीतसंगीतहरू सुनाउन थाल्यौं।
निकै दिनपछि उहाँले भन्नुभयो, 'तिमीहरूले गाएका लोकगीतहरू अनि आफैंले रचेका शब्द र संगीतहरूमा आफ्नैखाले विशेषता छ। मौलिक शैली र गुण छ। मलाई लाग्छ, तिमीहरूको प्रतिभा सबैमा पुर्‍याउन आवश्यक छ।' नभन्दै 'राल्फा' समूह निर्माण गरेर उहाँले साहित्य र संगीत विधामार्फत हामी र हाम्रा कृतिहरूलाई आफ्ना परिचित व्यक्तित्वमाझ लैजान सुरु गर्नुभयो।
गोपाल योञ्जन पारिजात दिदीकी ठूलीआमाको छोरा हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो जाति र परिवारबाट एकजना कलाकार राष्ट्रिय परिवेशमा झुल्किँदा उहाँलाई गौरवबोध हुन्थ्यो। सुकन दिदी पनि उत्तिकै खुसी।
बेलाबेलामा दिदीहरूलाई भेट्न गोपाल योञ्जन आइरहने गर्दा उनलाई नजिकैबाट देख्न, सुन्न र भेट्न पाउँदा हामीलाई आनन्द लाग्थ्यो। केही बुझ्ने, जान्ने, सुन्ने र सिक्ने मौका पाइने आशामा हामी हुन्थ्यौं।
यसरी गोपाल योञ्जन र नारायणगोपाल दुई मीतज्यू समयसमयमा दिदीकहाँ आउँदा उनीहरूको मितेरी जीवनका केही झाँकीझलक नजिकैबाट हेर्ने र सुन्ने अवसर मिल्थ्यो। अहा ! कति वजनदार, कति गहकिलो मित्रता !
मेरो चढ्दो उमेरले पनि त्यस्तै मित्रताको रहर गर्‍यो। क्या उल्लास ! चुट्किलाहरूका वर्षा ! रमाइला, फस्र्याइला, रंगिला मान्छेहरू ! उनीहरूले नजानेको क्यै छैनजस्तो। कहिलेकाहीँ त लाग्थ्यो, यिनै रहरलाग्दा उम्दा कलाकारहरूसँग दिनभरमात्र हैन, जीवनभरि सँगै रहन पाए जीवन कति सार्थक र सुखद हुँदो हो !
त्यही सिलसिलामा एक दिन मीतज्यूहरूलाई दिदीले कोठामा बोलाउनुभयो। साँझ दुवै मीतज्यू आए। हार्मोनियमको व्यवस्था गरिएको थियो। दिदी र अरू श्रोताहरूको आग्रहमा नारायणगोपालले 'आज र राति के देखेँ सपना मै मरी गएको' र गोपाल योञ्जनले 'पिउँछु अधर सुराको बेहोश बेहोश भएर' भन्ने गीत गाए।
जोर गितार बजाएर गीत गाउन सुरुमात्र के गरेका थियौ.. ल नारायणगोपाल तबला बजाउन पो सुरु गरे। छ मात्राको दादरा तालमा गीत थियो। एकैछिनमा भड्‍याङ र भडुङ जथाभावी अनेक खाले तलमा पो बजाउन थाले। आज पनि म सोच्‍छु, के नारायणगोपालले भाङभुत्ते तबला बजाएर हाम्रो तालसम्‍बन्धी योग्‍यताको जाँच लिन खोजेका थिए वा गीत भत्‍काएर बिजोग देखाउन नियतपूर्वक भद्रगोल ताल कानेका थिए ?
त्यसपछि दिदीको इच्छाअनुसार हामीहरूले गोपाल योञ्जन र नारायणगोपालसमक्ष दिदीलाई उत्कृष्ट लागेका राल्फाका छानिएका गीतहरू सुनायौं- 'रातसित मर्नेलाई मैले ढुंगाको चिसो लेउभरि पाएँ', 'बालुवा, किथ्रा, मरुभूमि', 'भोकै मर्ने महाकविका पेटका सारंगीहरू', 'कहाँ थियो धरती मेरो कहाँ थियो आकाश', 'कोसीछेउ उभेको सिमल जत्ति नि बाँच्दिनँ म'।
हामीले गाएपछि उनीहरूको के प्रतिक्रिया हुन्छ, त्यो बुझ्न दिदी साथै हामी पनि उत्सुक थियौं। तर, अहँ त्यहाँ कुनै प्रतिक्रिया थिएन। मानौं, हामी कुनै गायक, संगीतकार नै होइनौं। हामीले कुनै गीत गाएकै छैनौं।
दिदी चाहनुहुन्थ्यो, नाम चलेर शक्ति र विश्वास कमाएका उनीहरूले गाउँपहाडबाट आएका यी नयाँ चिचिलाहरूलाई उठाउन र चिनाउन केही अवसर, केही साथ सहयोग दिऊन्। तर हामी भएर पनि नभजस्तै भयौं त्यहाँ।
त्यो दिन गोपाल योञ्जन र नारायणगोपालसँगको भेटघाट र उनीहरूको व्यवहारबाट हामी निराश भयौ अपमानित भएको अनुभव भयो। दिदी त आक्रोशित नै हुनुभयो। 'के कुरामा उनीहरूको भन्दा तिमीहरूको गीत कमजोर छ?
गीतको स्तरीयता, विविधता, संगीतरचना, स्वर र प्रस्तुतिहरू केमा? मलाई लाग्छ, यिनीहरूलाई पनि राल्फाको गीतसंगीतको स्तरीयता बुझ्न निकै समय लाग्छ। सायद नबुझेरै केही नबोलेका होलान् कि? यो कुरा पछि समयले बताउला।'
सुकन दिदीचाहिँ अर्कै कुराबाट दु:खी हुनुभएको देखिन्थ्यो, 'बाबु हो, आज गोपालले रक्सीको गीत गायो। संगतले नामचाहिँ कमायो तर उसको घरपरिवार त दु:खी नै होला। यिनीहरूको घर त बुद्धले बास गरेको घर हो।
कस्ता बुद्धमार्गी भने सागपातमा भएका किराहरू मर्लान् भनेर एकएक पत्ता केलाएर खाने। भुइँमा हिँड्दा किरा कमिला मर्लान् कि भनेर पाउ चालीचाली हिँड्ने। जाँड, रक्सी र अन्य कुनै पनि नशा बर्जित छ त्यो घरमा।
गोपाल यस्तो होला भनेर त उनीहरू सपनामा पनि सोच्न सक्तैनथे। तर आज गोपाल यस्तो भयो- रक्सी नभई गाउनै नसक्ने, बाँच्नै नसक्ने। आजै त हाम्रैअघि 'पिउँछु मुहान सुराको' भनेर गायो। नसोचेको कुरा भयो बाबु आज।'
यस्तैमा केही दिनपछि अर्को गीत रेडियोमा बज्यो :
'गल्ती हजार हुन्छन् यहाँ होश हरा'को बेला
एक्लै तिमी नआऊ म मात्तिएको बेला।'
गोपाल योञ्जनको रचना, संगीत अनि नारायणगोपालको स्वरमा यो गीत सुनिसकेपछि दिदीहरूले गोपाल र रक्सीका बारेमा कुरै गर्न छाड्नुभो। 'गोपाल अब हाम्रो रहेन। अर्कै भइसक्यो', मलिन आवाजमा सुकन दिदीले भन्नुभो। पञ्चायती व्यवस्थाको सरकारले समेत 'यो त अति नै भयो' भनेर त्यो गीत रेडियो नेपालबाट बज्न प्रतिबन्धै लगाइदियो।
भूपि दाइसँग दिदी राल्फाका गीतहरूबारे कुरा गरिरहनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त निकै गरमागरमी बहस पनि चल्थ्यो। दिदी बराबर भनिरहनुहुन्थ्यो, 'के कुरामा राल्फाका गीतहरू पछि छन्? नेपाली गीतसंगीत क्षेत्रमा यी आउलान् र हाम्रो अस्तित्व हल्का होला भन्ने सायद धेरैलाई डर र ईर्ष्‍या छ।
कालो व्यवस्था उदांग हुने डर सरकारलाई पनि छ। त्यसैले सबै मिलेर राल्फालाई उठ्न र फैलिन दिँदैनन्। तिम्रो यसमा के विचार छ? सूर्य आकाशमा हुन्छ, हत्केलाले छोपेर छोपिँदैन कि !'
त्यो साँझपछिको भेटघाटमा मीतज्यूहरूप्रति हाम्रो जुन आकर्षण र मोह थियो। विस्तारै हराउँदै गयो। तर अनेक घटनाले हामीलाई सँगसँगै जोड्दै लान पनि थाल्यो। वीरगन्जका एकजना राणालाई लोकगीत सम्मेलन चलाउने लहड चलेछ। राल्फालाई पनि निम्तो आयो।
दिदीले हामीलाई सहभागी हुन पठाउनुभयो। सम्मेलनमा निकै घच्चाघच्ची पर्‍यो हाम्रो। 'अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी तिम्रो चियाको बुटामा' भन्‍ने गीत नै मुख्य आकर्षण थियो मीतज्यूहरूको भने हामीले 'राम राम रेलिसिक्री रामबेली बनमा', 'झिल्लीमाईको जन्ती नै आए दमाहा ठोकेर', 'रातोमाटो सिन्दूरको साटो', 'रेशम', 'भोल्गाकी सानी नानी'जस्ता गीत गायौं। सम्मेलन सकिएपछि भर्खर बस्ती बस्न सुरु गरेको हेटौंडामा हेटौंडावासीले हाम्रोमात्र कार्यक्रमको विशेष आयोजना गर्‍यो। पूर्वेली लोकगीतहरू उराल्यौं हामीले।
एउटा सुखद संयोग, झलकमान र जितबहादुर गन्धर्वसँग त्यहीँ हाम्रो भेट भयो र उनकै स्वरबाट पहिलोपल्ट 'बाबाले सोध्लान् नि खै छोरा भन्लान्' भन्ने मार्मिक लोकगीत सुन्यौं।
हामी र उनीहरु
एक दिन मीतज्यूहरू र हामीलाई भारतीय सांस्कृतिक सहचरीको आयोजनामा सांस्कृतिक साँझ मनाउने निम्तो आयो। मेहफिलमा मीतज्यूहरूले गीत गाइसकेपछि हामीलाई अनुरोध आयो। जोर गितार बजाएर गीत गाउन सुरुमात्र के गरेका थियौं... ल, नारायणगोपालले तबला समाते र बजाउन पो सुरु गरे !
छ मात्राको दादरा तालमा गीत थियो। 'रातसित मर्नेलाई मैले ढुंगाको चिसो लेउभरि पाएँ' गाउँदै थियौं। एकैछिनमा भड्याङ र भुडुङ जथाभावी अनेक खाले ताल पो बजाउन थाले उनले। तर उनको भाङभुत्ते तालवादनले हाम्रो गीतको सत्यानासचाहिँ पार्न सकेन।
उनको तबलामा ध्यान नदिई गितारको तालमा अडिएर पूरै गीत नबिगारी गायौं। आज पनि म सोच्छु- के नारायणगोपालले भाङभुत्ते तबला बजाएर हाम्रो तालसम्बन्धी योग्यताको जाँच लिन खोजेका थिए वा हाम्रो गीत भत्काएर बिजोग देखाउन नियतपूर्वक भद्रगोल ताल हानेका थिए?
त्यो बेला भेँडासिंको छेउ मछिन्द्रबहालनिर हाम्रो डेरा थियो अनि नारायणगोपालको घर अलि पर। राति खाना खाइसकेपछि भजनसंगीतको अध्ययन र आनन्द लिन भजनमण्डलीभित्र पुग्थ्यौं। मुग्ध भएर सुन्थ्यौं।
कतिपय भजन त हाम्रो बाले पनि गाउनुहुन्थ्यो जसलाई सुन्दा उहिलेको समय अनि बाको याद आइरहन्थ्यो। कोही कोही बेला गाँजाको नसाले मस्त भएर नारायणगोपाल पनि आइपुग्थे र लीन भएर भजन गाउन थाल्थे।
उनी आउँदा सबैले रमाइलो मान्थे। भजन सकिएपछि उनलाई गीत गाउन अरूहरूले आग्रह गर्थे। उनी सुन्दै नसुन्याझैं जुरुक्क उठेर हिँड्थे। 'यस्तै हो यो', अरूहरू भन्थे।
टोले साथीहरूले उनीबारे अनेक जानकारी सुनाउँथे, 'यो त असनको हान्ने साँढे हो। कसैलाई टेर्दैन, कसैलाई गन्दैन।' कोही अनेक घटना सुनाउँथे, 'रक्सीले चुर भई मातेपछि यो एकपल्ट भोटाहिटीतिरबाट आउँदै गरेको मछिन्द्रनाथको रथ रोक्न एक्लै हानिएर पुगेको थियो।' त्यो बेला नारायणगोपालको जीउ बलिष्ठ साँढेको भन्दा कम थिएन। कुस्तीबाज छोटेमोटे पहलमानजस्तो- मोटो र सन्डो।
पारिजात दिदीकहाँ खबर आयो, 'उतैकी एउटी केटीले नारायणगोपाललाई मन पराएकी छे रे। केटीचाहिँ शेर्पिनी, लमिनी के हो रे ! अहिल्यै बिहे नै गरिहाल्ने रे।'
एक दिन मध्याह्नमा मछिन्द्रबहालनिर नारायणगोपालले हामीसँग परिचय गराए, 'उनी पेमला, मेरो जीवनसाथी। अनि उनीहरू हाम्रा राल्फा भाइहरू।' हामीले हेर्‍यौं, 'कति शिष्ट, गम्भीर र भद्र महिला। देख्दै आदर लाग्ने।' दुई हात जोडेर हामीले नमस्ते अभिवादन ग:यौं।
काठमाडौंमा 'गोपाल योञ्जन नाइट' हुने भयो। एक किसिमको तरंग चल्यो। हामीलाई पनि सहभागी हुन खबर आयो। भेटमा गोपाल योञ्जनको संगीतमा दुई गीत अनि दुइटा लोकगीतचाहिँ हाम्रै संकलनको गाउने निर्णय भयो।
राष्ट्रिय नाचघरको मञ्चमा राल्फाको गठनपछि पहिलो गायन प्रस्तुति थियो त्यो। त्यसमा रायन, अरिम, म र गणेश रसिक उत्रेका थियौं। गोपाल योञ्जनले हार्मोनियममा लिड गरेका थिए। त्यो फोटोले आज पनि भावुक बनाउँछ मलाई।
कार्यक्रममा गोपाल योञ्जनका धेरै स्तरीय शब्दरचना र संगीत विभिन्न गायकगायिकाका आवाजमा प्रस्तुत भए। तर हाम्रा नेपाली श्रोतादर्शकलाई रुचेन, पचेन। असभ्य होहल्ला, हुटिङले कार्यक्रमलाई बाधा पु:याइरहयो। कार्यक्रम सकिनेबित्तिकै गोपाल योञ्जन डाँको छाडेर रुन थाले।
'दार्जिलिङमा हामी हाम्रो देश नेपाल भनेर कति गौरव गथ्र्यौं। बंगालीहरूसँग नेपाली कलासंस्कृतिका लागि कति लड्थ्यौं, भिड्थ्यौं तर आज मेरो देशले मलाई अपमान र बेइज्जती गर्‍यो।' कसैको काखमा शिर राखेर उनी रोइरहेका थिए।
वरिपरि सम्झाउनेहरू निकै थिए। सायद यही तितो घटनाका कारण होला, केही समयपछि उनले गीत लेखे, 'मेरो गीत म उभेको धुलोले सुनोस्... मेरो गीत कोही सुन्दैन भने आकाश बतासले सुनोस्। सुखीलाई रुच्दैन भने कोही असहायले सुनोस्।'
एक रात ८ बजेपछिको अंग्रेजी समाचार आइरहेको थियो। गोपाल योञ्जन पारिजात दिदीको कोठामै थिए। अंग्रेजी खबर सुन्दासुन्दै मक्ख परेर गोपाल बोलिरहेका थिए, 'सो नाइस् पर्फमेन्स लेडी'।
केही समयपछि दिदीकहाँ नै खबर आयो- ब्रिटिस भीसीकी छोरीसँग गोपालको बिहे हुने पक्का भो। 'कोसँग?' 'त्यै क्या, रेडियोबाट अंग्रेजी खबर भन्ने रेन्छेन डोल्मासँग...।' लौ दुवै मीतज्यू बिहेबन्धनमा बाँधिए।
समय बित्दै जाँदा एक समूहबाट समाजमा नमीठा कुराहरू फैलाउन सुरु भयो, 'नारायणगोपाललाई नारायणगोपाल बनाउने गोपाल योञ्जनका गीतहरू हुन्। पहिले उसका गीतहरू के थिए? पूरै अल्लारे... स्तरहीन...। पछि गोपाल योञ्जनका गीतहरूले नारायणगोपाललाई कहाँ पुर्‍यायो !'
अर्को समूहले पनि प्रतिवादमा त्यस्तै आरोप फैलाउन थाल्यो, 'जतिसुकै राम्रो गीत किन नहोस्, नारायणगोपालको स्वर नपाएको भए कुन कुनातिर कुहिएर सड्थ्यो होला त्यस्ता गीत ! त्यै स्वरको लागि न हो, गोपाल योञ्जनले मरिहत्ते हालेको।' कुरा दुवैतिरको सही थियो।
नारायणगोपालको स्वर र प्रस्तुतिले गोपाल योञ्जनको गीत जीवन्त भएको थियो। त्यस्तै गोपाल योञ्जनका भावपूर्ण शब्द र मर्मस्पर्शी लयहरूले नारायणगोपालको स्वरको पहिचान र उचाइ उठाएको थियो।
हुँदाहुँदै दुई मीतज्यूको सम्बन्ध चिसिँदै गयो। अन्त्यमा अलग हुने समय पनि आयो। नारायणगोपाल अरू गीतकारका गीत खोज्दै त्यसमा आफैंले संगीत भर्दै गाउन थाले। गोपाल योञ्जनले पनि आफ्नो शब्दरचना र संगीतमा विस्तारै आफ्नै स्वरमा गाउन सुरु गरे।
नारायणगोपालका पछिल्ला गीतहरू प्रेमप्रणयका र केही राष्ट्रिय गान थिए भने गोपाल योञ्जनका गीतहरूमा केही विविधता थियो। तर समाजमा रहेका कुरीति, विकृति, विभेद र असमानता हटाउन दुवैतिरबाट त्यति कला र गला चलेन।
समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास, कुसंस्कार, ध्वस्त पार्न जनतालाई सचेत पार्दै जनताबाटै त्यस्ता अभियान सञ्चालित होस् भन्ने भावना कुनै गीतमा पाइएन। जनतामा राजनीतिक चेतना उठाउन, एक मुठी सामन्त र सम्भ्रान्त वर्गको हातमा रहेको राजनीतिक शक्ति जनतामा पु:याउने सोच दुवैतिरका कुनै गीतमा पाइँदैनथ्यो। हामी भने एउटा सोच, लक्ष्यका साथ जनताको पक्षमा उभिएर राल्फादेखि नै गीत गाइरहेका थियौं।
राल्फाबाट कम्युनिस्टतिर ढल्कँदै आखिर कमरेड नै बन्यौं हामी। कम्युनिस्ट कमरेड बनेपछि हामीलाई अर्कै ढंगबाट शिक्षादीक्षा दिन थालियो। 'गरिब, दुखी, श्रमशील जनताका पक्षमा सम्पूर्ण कलाकर्म' भन्ने सिद्धान्त मनको अन्तरसम्म पुर्‍याइयो। मजदुर, किसान र लालसेनाका लागि कलासाहित्य भन्‍ने माओत्सेतुङका कृति-किताबहरू पढ्न लगाइयो।
« Reply #3 on: December 06, 2015, 04:01:53 PM »
मैले गाउँदा उनको..
निम्न मध्यमवर्गीय बुर्जुवा वर्गवाट आएको हुनाले सर्वहारा वर्गमा रूपान्तरण हुन अनेक लेख र पुस्तकको अध्ययनमा संलग्न हुन प्रेरित गरियो। त्यसमा हाम्रो सगर्व स्वीकृति थियो।
म धरानमा थिएँ। एक दिन अनायास नारायणगोपालको गीतको लय गुन्गुनाउन पुगेछु। त्यो बेला एक जिम्मेवार कमरेड पनि मसँगै थिए। हामीलाई कुनै गोप्य ठाउँमा लगेर भूमिगत ढंगले प्रशिक्षण दिने तयारीमा थिए उनी। 'कमरेड तपाईंले कसले गाएको गीतको लय गुन्गुनाउनुभो?' 'नारायणगोपालको..!', म झल्याँस्स भएँ कुनै अपराधीझैं।
'लय, संगीत, स्वर भनेको के हो? तपाईंलाई थाहा छ कमरेड? यी यस्ता सुगरकोटेड रंगीन गुलिया लेपहरू हुन् जसको प्रयोग गर्न जानेनौं भने त्यसभित्र लुकाएर राखेका मन्दविषले हामी विस्तारै सिद्धिन पुग्छौं। नारायणगोपालको स्वर पनि त्यस्तै गुलियो लेप हो।
हामी दुनियाँ बदल्ने विशेष धातुका मान्छेहरूले यो कुरा बुझ्नैपर्छ कि नारायणगोपालको स्वरको जादुई लेपभित्रका गीतले कुन वर्गको हित गर्छ? यस्ता हल्काफुल्का गीतहरूले के संसार बदल्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ कमरेड?
हड्डीभित्र जमेर बसेको बुर्जुवा वर्गीय संस्कार बदल्न पहिला आफैंसँग जबरजस्त द्वन्द्व चलाउनुहोस् र विजयी बन्नुहोस्। अनिमात्र तपाईं कम्युनिस्ट फाँटमा आउन योग्य बन्नुहुनेछ।' तर अफसोच ! कालान्तरमा यिनै नेता कमरेडले सत्ताप्राप्तिको नजिक पुग्दा एउटा पत्रिकाको अन्तर्वार्तामा 'तपाईंलाई मन पर्ने गायक को हो?' भनेर सोध्दा 'नारायणगोपाल' भनेका थिए।
अब हामी गोपाल योञ्जन र नारायणगोपालबाट धेरै टाढा भइसकेका थियौं। उनीहरू एक्लाएक्लै भए पनि केही न केही गर्दै थिए। तर पहिलाको जस्तो उल्लास थिएन सायद। हामीचाहिँ निम्नवर्गीय जनतामा आशा र विश्वास जगाउन, क्रूर पञ्चायती व्यवस्था भत्काउन टाढाटाढाका गाउँ पुगिरहेका थियौं।
२०३६ सालको जनआन्दोलनमा पार्टीकै निर्देशनमा सहरमै उत्रेर जुलुसमा क्रान्तिका गीतहरू गायौं। २०३९ सालमा पार्टी छोडेँ। २०४६ सालमा स्वतन्त्र रूपमा जनस्तरबाट गीतहरू गाएर जनआन्दोलनमा सहभागी भएँ।
यसैबीचमा गोपाल योञ्जनको तर्फबाट निमन्त्रणा आयो- आफ्नो नयाँ गीतिअल्बम 'निसानी'को लोकार्पण कार्यक्रममा उपस्थित हुन। प्राप्त गीतिअल्बम सुनेँ। धेरै मेहनतले गायन क्षमता बढाएका रहेछन्। स्वर ओजिलो र भावपूर्ण थियो।
उनको बालगीतको अल्बम पनि सुनेँ। त्यो दिन धेरै समयपछि भेट्दा गोपाल योञ्जनबाट बढी आत्मीयता पाएँ। तर दु:खको कुरा, त्यहाँ उपस्थित नजिकका मान्छेहरू भन्थे, 'रक्सीको मात्रा धेरै नै बढिसक्यो। शरीर पूरै रक्सीले खाएजस्तो छ। मान्छे धेरै असल छन् तर हामीसँग धेरै रहन्नन् कि !'
त्यही समयतिर नै नारायणगोपालबाट पनि केही कुरा आयो, राल्फाको 'कोसीछेउ उभेको सिमल' र 'उडेर जाऊ बादलु'जस्ता गीत उनी गाउन चाहन्छन्। माले पार्टी छोडेको धेरै समय भएर पनि हामीमा रहेको केही अप्ठ्यारोपनले नारायणगोपालसँग सहकार्य गर्न सकिएन। रुचि नै नभएकोचाहिँ थिएन।
पोखराको एउटा कार्यक्रममा मदनकृष्ण र हरिवंशसँगै अरिमको साउन्ड सिस्टमको सहयोगी भएर गएको थिएँ। महको नाटकसँगै नारायणगोपालको गायन पनि थियो। नारायणगोपाल- त्यस्तो ज्यांगो मान्छे दुब्लाएर सानो जीउको भएछन्। मायालाग्दो।
होटेलको कोठामा बिहानैदेखि रक्सी सेवन गर्न थाले। हार्मोनियम बजाएर गीतहरू पनि गाइरहे। साँझपख कार्यक्रम सुरु हुने बखत पञ्चायती अञ्चलाधीश नारायणगोपालसँग बडा ठालु पल्टेर सोधपुछको सान दिन आए। उनले टेरपुच्छर लाएनन्। अपमानित अनुभव गरेर अञ्चलाधीश बाटो लागे।
नारायणगोपाल सरकारी बडाबडा हाकिम भनाउँदा र राजनीतिक नेताजीका फूर्तिफार्ती र सानलाई एकजात गन्दै गन्दैनथे। त्यस्ता पाखण्डीका अघि स्वाभिमानी, आत्मसम्मानी कलाकार भएर उठेको देख्ता नारायणगोपाललाई भित्री मनले धन्यवाद दिन मन गर्थ्‍यो। तर सामान्य जनताका सामु पनि उनी त्यस्तै नम्र र शिष्ट भए अझ राम्रो लाग्ने कुरा मनमा आउँथ्यो। पहिलेका भन्दा धेरै सौहार्द थिए उनी। कार्यक्रमपछिको समारोहमा उनले नेपाली संगीत क्षेत्रमा नेपाली अर्केस्टा हुनुपर्नेमा जोड दिए।
मिर्गौला, कलेजो खाइसकेको रहेछ रक्सीले। धेरैधेरैको शुभकामना र सदिच्छाले काम गरेन। दुखीजन बाटोभरि रोइरहेका थिए। घरघरबाट नारायणगोपालका गीत बजिरहेका थिए। उनको शरीरको पछिपछि म पशुपतिसम्म पुगेँ।
फर्किंदा उनको सम्झनाका तरंगहरूमा तरंगिरहेको थियो मन। मन भावुक भएर गाइरहेको थियो, 'बिहान नभई बतासले शीत किन सुकाइदिन्छ, जस्तै मेरा पीरहरूले गीत सबै लुकाइदिन्छ...।'
बलिदान फिल्मको सुटिङ सकिसक्दा बिहानै एउटा दुखद खबर आयो, 'बिरामी भएर दिल्ली लगिएका गोपाल योञ्जनको उतै मृत्यु भयो।' उनको घर बसुन्धरामा पुग्यौं। कोठाभित्र थियो उनको मृत शरीर। विश्वासै नलाग्ने।
उसैगरी उनको शरीरलाई पनि प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा राखियो। स्वयम्भू पु:याएर खरानीमा विलीन गराइयो। फर्कंदा अनायास उनको त्यै गीत मेरो अन्तस्करणमा गुञ्जिरहेको थियो :
'मेरो गीत मेरो प्रतिविम्ब होइन
जो टुटी जाने होइन, फुटी जाने होइन
आकाशजस्तो अमर गीत मेरो
मजस्तो दुई दिनको पाहुना होइन।'
दु:ख लाग्छ, हाम्रा हृदयमा बाँचेका यी मानिसलाई किन एकनाससँग रक्सीले चुँडेर बराबर मृत्युको गुफातिर घिसार्ने काम गर्छ? किन लम्पसार पर्छन् त्यत्रा जानिफकार मान्छेहरू यो तुच्छ रक्सीसँग? एकजना भाइको कुरा सम्झन्छु, 'दाजु, यो जाँडरक्सीले गर्नु ग:यो। हेर्नोस्त, करिब चौंतीस जनाजति नेपाली कलाकार यसले सिध्याइसकेछ !'
गोपाल योञ्जनको स्मृति दिवसमा प्रदीप बम्जन भाइ मलाई बोलाइरहनुहुन्छ। सश्रद्धा म पुग्छु। प्राय: त्यहाँ तामाङ जातिको बाहुल्य हुन्छ। मनले प्रश्न गर्छ, 'किन गोपाल योञ्जन तामाङ जातिका मात्र कलाकार हुन् र?'
देश र देशभक्तिबारे सरल भाषामा त्यति धेरै गीत लेखेर हामीमा देशभक्ति जगाए। हामीभित्रको नेपाली स्वाभिमान जगाए। एकताबद्ध रहन आह्वान गरे। अवश्य पनि गोपाल योञ्जनका राष्ट्रगानहरूको सन्देश यही हो।
म फेरि त्यै २०२४ सालकै 'गोपाल योञ्जन नाइट'को सम्झना गर्छु। गोपाल योञ्जनका बरबरी खसेका आँसु सम्झन्छु। र सम्झन्छु, तिनका ती पीडक भनाइहरू- 'अरे, यो त दार्जिलिङे हो। यसको देशभक्ति नक्कली हो।
अवसर छोप्न नेपाली भइटोपलेको मात्र हो।' यत्रो आरोपको खण्डन गर्न उनलाई एउटा जीवन पूरै लाग्यो। म त्यस्ता आरोप लगाउने साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु, 'क्षमा माग्नोस् र भन्नोस्- हिजो हामीले सोचेका कुरा गलत रहेछन्। मिथ्या रहेछन्। तपाईं हृदयदेखि नै नेपालीहरूको मन, मस्तिष्क र बोली हुनुहुँदो रहेछ।'
महाराजगन्जतिर बराबर जाने काम परिरहन्छ। चौबाटोको चोकमा नारायणगोपालको सालिक एक्लै देख्छु र सोच्छु, 'नारायणगोपालसँगै गोपाल योञ्जनको सालिक पनि सँगै रहे कति सुन्दर, आत्मीय दृश्य हुन्थ्यो होला त्यो !'
ramesh rayaan.jpg (35.68 kB, 450x390 - viewed 381 times.)
ruprekha.jpg (68.08 kB, 650x535 - viewed 484 times.)
« Reply #4 on: December 11, 2015, 11:42:06 PM »
‘यो मुटुलाई....’ गाउनुअघि नारायण गोपालले आधा किलो आइसक्रिम खानु भयो : तुलसी घिमिरे
मंसिर १९, 2072
निबार स्वरसम्राट नारायण गोपालको २५ औं स्मृति दिवस हो । उनका सबै गीतहरु उत्तिकै कालजयी छन् । उनले गाएको अन्तिम गीत ‘यो मुटुलाई कसरी सम्झाई बुझाउँ’ हो । तुलसी घिमिरे निर्देशत ‘दक्षिणा’ फिल्मका लागि गाएको सो गीतका बारेमा घिमिरेसँग रोचक सम्झना छ ।
एक टेलिभिजन अन्तरवार्ताका क्रममा घिमिरेले भनेका थिए,‘यो गीत नारायण दाइले मेरो लागि छोडेर जानु भएको सबैभन्दा ठूलो गिफ्ट भयो ।’ घिमिरे स्वयंले अभिनय गरेको यस गीतबारे सम्झँदै घिमिरे थप्छन्,‘यो गीतले मलाई मेरो टाइमको याद त दिलाउँछ नै त्योभन्दा बढी नारायण दाइको प्रयोगको घडी आउँछ । उहाँले गीत रिहर्सल सकेर रेकर्ड गर्नुअघि आधा किलो आइसक्रिम माग्नुभयो । रेकर्डिष्ट दमनसुद शाहले ‘यसका गाना अघि रेकर्ड करना हे ना ? क्या कर रहा हे ए आदमी ?’ भने । रञ्जित दाइ (संगीतकार रञ्जित गजमेर) ले ‘ऊ यस्तै मुडी हो’ भनेपछि रेकर्डिष्ट चुप लागे । नारायण दाइले पेमला भाउजुसँग एकपल्ट ‘खाने ?’ भनेर सोध्नु भयो । खाइसकेर उहाँ रेकर्डमा लाग्नुभयो । उहाँले फुल मुडमा गाउनुभयो । रेकर्डिष्टले पनि फिल गरे । चिसो लागेर होला, गाइसकेर लाष्टमा खोक्नुभयो । रेकर्डिष्ट पनि छक्क परे । रेकर्डिष्टले यस्तो यो खोकि पनि ननिकाल किनकी योभन्दा राम्रो हुनसक्दैन भने । त्यसैले हामीले फिल्ममा पनि खोकि पनि राख्यौं ।’
नारायण गोपालको अन्तिम गीतमा अभिनय गर्न पाउँदाको खुशी साट्दै घिमिरे भन्छन्,‘मेरो मित्र विनोद प्रधानले भन्नुभयो,‘तैँले सिरियस अनुहार मात्र लगाएर मात्र बसिस् भने पनि यो गीतले तेरो पर्फमेन्सलाई माथि पु¥याइदिन्छ । यो गीत आफैंमा त्यति गहिरो र संवेदनशिल छ ।’
narayan gopal.jpg (13.67 kB, 600x400 - viewed 509 times.)
« Reply #5 on: July 13, 2018, 09:18:34 AM »
(वि.सं. १९९६ साल असोज १८ -वि.सं. २०४७ साल मंसीर १९ )
नेपाली जातिका सर्वप्रिय गायक नारायणगोपालको जन्म वि.सं. १९९६ साल असोज १८ गते काठमाडौँको किलागलमा भएको थियो । बुवा आशागोपाल गुरुवाचार्य र आमा राममाया गुरुवाचार्यका नौ सन्तानमध्ये माइला नारायणगोपालले बीएसम्मको अध्ययन गरे ।
सानामा लजालु स्वाभावका नारायण भजन मण्डलीहरुमा प्रशस्त जाने गर्दथे । उनका बुवा आशागोपाल सानो उमेरमा नै आफ्नो छोरोले तबलामा साथ दिन थालेकोमा निकै खुशी थिए । दिनभरको स्कूल र साँझ पर्ने बित्तिकै भजन मण्डलीको मनोरञ्जनले नारायणलाई सानैदेखि सङ्गीतको सङ्गत लागेको थियो । उनी किशोर अवस्थामा पुग्नासाथ दुइ कुराको आदि भए । एउटा चूरोट पिउने र घरनजिकैकी बेबीलाई एकतर्फी प्रेम गर्ने ।
पुराना कुरा सम्झदै प्रेमध्वज प्रधान सम्झन्छन्- “दुइ वर्षेदेखि बेबीलाई मन पराउँदो रै’छ, केटीले भने एकरत्ति नगन्ने । धेरैपछाडि हामीलाई थाहा भयो । हामीले उसलाई सम्झायौँ, घाँस पनि नहाल्ने यस्तालाई के मरिहत्ते गर्छस् ! गोडा भए जुत्ता कत्ति कत्ति भन्थ्यौँ । निकै पछाडि मात्रै उसले बेबीलाई ध्यान दिन छाड्यो ।”
“उसको एकतर्फी प्रेम छुटाउन मैले मेरी आमाको उदाहरण दिने गर्दथेँ,” प्रेमध्वज आफ्नो किशोरकालीन साथीको सम्झना गर्दै भन्छन्- “मेरो बुवा आमाको पनि लब म्यारिज थियो, तर उहाँहरुको प्रेम सफल हुन सकेन । पछि आमा बेग्लै बस्न थाल्नुभयो । प्रेम गर्यो भने दुःख पाइन्छ, मेरी आमाको हालत हुन्छ भनेर सम्झाएपछि उसले बल्ल बेबीलाई छोडेको थियो । धेरैपछि नारायणगोपाल हिट भएपछि बेबी पछुताएकी थिई ।”
“उसबेला नै गँजडी थियो, दिनभर पढाइबाहेक अरु काम थिएन त्यसैले उसलाई नपत्याएकी हुनसक्छ”, नारायणगोपालको पहिलो प्रेमको अन्त्यका बारे प्रधान हाँस्दै बताउँछन् ।
यो त्यो बेला थियो, साइँला उस्तादका छोरा रत्नमान, माणिकरत्न, प्रेमध्वज प्रधान, नरेन्द्र बाटाजु, उमेरमा केही सानो भए पनि योगेश वैद्यजस्ता सङ्गीतप्रेमीहरु अर्का एक सङ्गीतप्रेमी लक्ष्मण श्रेष्ठको घरमा भेला हुन्थे । लक्ष्मण श्रेष्ठ सम उमेरका र उनी दिनभर पसलमा बस्ने हुनाले उनीसँग थोरबहुत पैसा हुने गर्दथ्यो । कहिलेकाहीँ लक्ष्मणको निगाहले त्यो समूह साँझ परेपछि मनपर्दी खान पाउँथे । उनको घरमा गीतकार राममान तृषितले एउटा कोठा भाडामा लिएका थिए नवकला परिवार संस्थाका लागि । क्लबजस्तो थियो त्यो कोठा । त्यही कोठामा नारायणगोपाल बेञ्च तानेर त्यसलाई ठटाउँदै गुन्गुनाउने गर्दथे तर साथीहरुले अलि राम्रो स्वर निकालेर गीत गाउन अनुरोध गरे भने लजाउँथे । तर बेञ्जलाई तबला ठटाएसरी अरुलाई गाउनमा स्वर खाप्न भने खप्पिस थिए ।
कहिलेकाहीँ यी साथीहरुले नारायणलाई ‘जौँ रेडियो’ भन्दा लजाउँथे ।
यो समूहको साँझको काम निकै रमाइलो हुन्थ्यो । १० रुपियाँमा माइक भाडामा ल्याउँथे । माइक भाडामा ल्याउने उत्रो रकम यो समूहमा लक्ष्मण श्रेष्ठबाहेक अरुसँग हुँदैनथ्यो । चार पैसामा फूलमार चूरोट आउँथ्यो, त्यो फुर्माइसी पनि लक्ष्मणले नै गरिदिन्थे । उसबेलाको एउटा रेडियो यस्तो हुन्थ्यो, माइकलाई रेडियोमा जोड्यो भने रेडियोबाट बोलेको आवाज आउँथ्यो र रेडियोमा गाएको आनन्द ती युवाहरु लिने गर्दथे ।
यो बेलासम्म प्रेमध्वज र माणिकरत्नले रेडियो नेपालमा हिन्दी गीत गाएर आफ्नो स्वर परीक्षण मात्र गराएनन्, पास पनि भए । तर नारायण स्वर परीक्षा दिन डराए ।
नारायणगोपालको घर खान्दानी । नेवार समुदायमा सबैभन्दा उच्च जात मानिन्छ गुरुवाचार्य । नारायणगोपालको घर ९० सालको भुइँचालोमा पनि केही क्षति नभएको । त्यति मजबूत थियो उनीहरुको बुनियाद ।
नारायण किशोरावस्थामा निकै बलिया बाङ्गा । कतिसम्म भने आफ्ना काकाको चुनावमा उहाँलाई सघाउन प्रेमध्वजले आफ्नो हितैषी साथी नारायणलाई चौतारा लगेका थिए । दुइ दिन लाग्ने बाटो यी दुइ ठिटाले ११ घण्टामै पार गरेका थिए ।
नारायण पढाईमा उति उत्कृष्ट थिएनन् । उनलाई स्कूले हिसाबबाट निकै घृणा थियो । हिसाब नै उनको दुश्मन थियो । अँग्रेजीमा निकै राम्रो थिए उनी । १० कक्षामा नै एक पटक हिसाबका कारण झण्डै फेल भएका थिए । १३ सालमा नै एसएलसी पास गर्नुपर्ने नारायणले १६ सालमा पास भएका थिए । राममान र प्रेमध्वजले उनको पढाईमा निकै सहयोग गरेका थिए ।
एसएलसी पास नगरी रेडियोमा स्वर परीक्षा दिन नजाने अड्डी कसेका उनले एसएलसी पासलगत्तै राममानको शब्दसङ्गीतमा पंक्षीको पंखमा धर्तीको याद दियो… गाएर भ्वाइस टेष्ट पास गरेका थिए ।
कलेज पढ्दाताका उनका साथीमा थपिए रत्नशम्शेर थापा र अन्य । यो समूहले उनको साङ्गीतिक ऊर्जालाई अझ मौलाउने अवसर प्रदान गर्यो ।
यसबीचमा उनले आँखाको भाका आँखैले…, मधुमास यो दिलको बाग नफुलिकन…, म भोरका किरण हुँ…, स्वर्गकी रानी मायाकी खानी…, भो भो नसोध मलाई…, कुञ्जमा गुञ्जियो…जस्ता हिट गीत गाए । यीमध्ये अधिकांश गीत रत्नशम्शेरका थिए । यीमध्ये कतिपय गीतहरु हिन्दूस्तानी, पाश्चात्य रक तथा पप शैलीमा गाएका थिए ।
यहाँ हिट भएपछि एक पटक नगेन्द्र थापालाई नारायणगोपालका पिताले भने- “ए, थापाकाजी लौ न मेरो छोरो त सस्ता गीत गाएर बिग्रन थाल्यो । अलि राम्रा गीत गाउन लगाउनु पर्यो ।”
नगेन्द्र यतिबेला सम्झन्छन्- “छोरो प्रेमप्रणयका गीतमा मात्र अल्झ्यो, शास्त्रीय सङ्गीतमा रत्ति मन दिएन भनेर बाबु चिन्तित थिए । त्यही भएर शास्त्रीय सङ्गीत सिकाउन बडोदा (भारत) पठाउने योजना थियो । पछि बाबुको इच्छा पूरा गर्न ऊ बडोदा गयो ।
बडोदा जाउञ्जेलअघि “ए कान्छा ठट्टैमा…” निकै हिट भइसकेको थियो । धेरै केटीहरु यो गीत आफैँमाथि लेखेको ठान्थे, आफैँलाई सम्झेर नारायणले गाएको ठान्थे । त्यस्तो ठान्नेमध्ये दार्जिलिङ सुकियापोखरीकी पेमाला लामा पनि थिइन् । जो सुकियापोखरीमा बीए पास उपरान्त स्थानीय स्कूलमा पढाउन थालेकी थिइन् । पेमाला मनमनै नारायणलाई मन पराउन थालेकी थिइन् र पत्रव्यवहार शुरु भइसकेको थियो । यसैबीच उनी बरोडा गए, शास्त्रीय सङ्गीत पढ्न ।
पत्रव्यवहार जारी नै थियो । खासगरी नारायणको प्रशंसामा पत्रहरु कोरिएका हुन्थे र नारायण पेमालाको लेखाईको प्रशंसक थिए ।
बडोदामा उनलाई पढ्न उति रुचिकर लागेन । “सबै थाहा भएकै त कुरा हो, नयाँ कुरा सिक्ने केही छैन”, साथीहरुसँग कहिलेकाहीँ गुनासो गर्ने गर्थे । उनी आफ्नो रुचिले भन्दा पनि बुवाको रुचिका कारण त्यहाँ पढ्न गएका हुनाले पढाईमा मन थिएन ।
अर्को कुरा, चूरोटमा गाँजा हालेर मजाले तान्नु उनको गायन जत्तिकै शोख थियो । बडोदामा विशेषगरी, पाठशालामा चूरोट पिउनु अपराध नै ठानिन्थ्यो । तलतल लाग्ने बित्तिकै उनी शौचालयमा शौचको बहानामा गाँजा र चूरोटको सर्को तान्थे । तर पछि गुरुहरुलाई पनि शंका लाग्न थालेपछि शौच पुग्न पाएको छैन, जासूसहरु आइपुगिहाल्ने । उनले बरोडामा सङ्गीत छोड्नुको मुख्य कारण यही थियो- मजाले चूरोटसँग गाँजा तान्न पाइँदैनथ्यो । धेरै केरकार हुन थालेपछि उनले पर्ढाई त्यागे र सीधै नगेन्द्र थापाकहाँ दार्जिलिङ पुगे । दार्जिलिङ पुग्नुको अर्को कारण चाहिँ सुकियापोखरीकी सुकन्या पेमाला थिइन् ।
पेमालालाई पहिलो पटक हेर्न उनी सन् १९६५ मा दार्जिलिङ गए । यसैबेला गोपाल योञ्जनसँग उनी पनि निकै नजिकिए । थोरै दिनका लागि आएका नारायण त्यहाँ पुग्दा नगेन्द्र थापाले पेमालासँग पहिलो पटक भेट गराइदिए । शुरुमा त पेमालाले नगेन्द्रलाई नारायण ठानेर अनौठो व्यवहार देखाइन् तर पछि नगेन्द्रले म नारायण होइन, ऊः पर छ भनेर देखाएपछि भने हाँसोको फोहोरा छुट्यो । त्यो बेला दुइ जनाको रोमाञ्चक भेटघाट हेर्न लायक् थियो । नारायण, गोपाल, नगेन्द्र र पेमाला नजिकैको सिमाना डाँडामा बसेर नारायणले पेमालाको अनुरोधमा “यो मौसम यो हरियाली” गीत गाए ।
यही बेला हो, नारायणगोपाल र गोपाल योञ्जनले मीत लगाएको । दार्जिलिङ बसाईकै क्रममा इश्वर बल्लभ, नारायणगोपाल, गोपाल योञ्जन, नगेन्द्र थापा, डा. गम्भीर योञ्जनसहित महाँकाल डाँडोमा मीत लगाउने कार्य सम्पन्न भयो । अँगेटी बालेर्रर् इश्वर बल्लभले केही पढे र दुवै आजदेखि मीत भयौ भनी मीत लगाइदिए ।
कल्पनाका उडन्ते कुरा गर्नु, जोक् गर्नु, खाना बनाउनु उनका अचम्मका शोख थिए । मेथीको अचार, बोसो भएको मासु, हलुवा, गुँदपाक, जेरी आदि शानदार ढङ्गले खाने उनको शोख थियो । खानुलाई उनी ‘भत्काउनु पर्छ’ भन्थे । खेलकूदमा फूटबल उनको सबैभन्दा मनपर्ने खेल थियो र उनी जीवित रहुञ्जेल काठमाडौँमा भएका फूटबल म्याच शायदै छुटे होलान् । चेस र तासको पप्लु खेलमा उनलाई विशेष प्रेम थियो ।
मीत लगाएपछि दुवैको शानदार मितज्यू नाइट सम्पन्न भयो । काठमाडौँदेखि दार्जिलिङसम्म एउटा भव्य टूरको आयोजना भएको थियो । यही कार्यक्रमको सिलसिलामा बिराटनगरस्थित नगेन्द्र थापाको घरमा बसाइँ बस्दा नारायणगोपाल र गोपाल योञ्जनले अनौठो नाम पाएका थिए । नारायणलाई घिऊकुमार र गोपाललाई खोर्सानीकुमार नाम नगेन्द्र थापाकी आमाले राखिदिनु भएको थियो । त्यहाँ बसाईको क्रममा नारायणले घिऊ निकै स्वाद लिएर खाए भने गोपालले थपिथपि खोर्सानी खाइदिए ।
यसपछि उनीहरुको बिहे भयो । बिहेपछि उनलाई किलागलस्थित घर ल्याइएन । त्यसबेला निकै लोकप्रिय भइसकेका हुनाले उनलाई सहयोग गर्न पोखरामा केही साथीहरु तत्पर थिए । तत्पर साथीमध्ये भूपि शेरचन र अन्य । पेमालालाई एउटा स्कूलमा जागीर पहिले नै खोजिसकिएको थियो । नारायण भने त्यसबेला सङ्गीतमै बढी रमाए । तर करिब सात आठ महिना त्यहाँ बसिसकेपछि नारायणलाई पोखराको वातावरणमा आफूलाई प्रतिकूल ठान्न थाले । यसपछि प्रेमध्वजलाई आफ्ना लागि केही जागीर खोजिदिन अनुरोध गरे । प्रेमध्वजले पनि माणिकरत्नलाई भनेर माणिकरत्नका साथी कन्हैया तिमिल्सिनालाई भनियो । कन्हैयाका काका त्यसबेला सांस्कृतिक संस्थानका सहायक महाप्रबन्धक थिए । यसपछि नारायणले नाचघरमा जागीर पाए र पेमालाले भारतीय एउटा जीवन विमा कम्पनीमा जागीर पाइन् । यहीँको जागीरको पैसा जोगाएर दुइ प्राणीले महाराजगञ्जस्थित तत्कालिन भूतबंगला छेउ तीन रोपनी जग्गा किने ।
यसपछि उनी निकै लोकप्रिय पनि अति लोकप्रिय भए ।
बि.सं. २०३६ सालपछि नेपाली राजनीतिक घटनाक्रममा केही परिवर्तन देखापरे । देशमा जनमत सङ्ग्रह घोषणा भयो र सुर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनाइए । सुर्यबहादुर थापाका भाइ नगेन्द्र थापाले यो अवसरलाई त्यत्तिकै खाली जान दिएनन् र नारायण गोपाललाई नाचघरको महाप्रबन्धक बनाइदिए ।
महाप्रबन्धक बनेपछि केही सङ्गीतकर्मीको भनाइअनुसार उनी अलि बढी नै असहिष्णु बन्न थाले । माणिकरत्न उनका लगौँटी साथी थिए, तर उनको महाप्रबन्धकीय पालामा माणिकरत्नले नाचघरबाट हात धुनु पर्यो । नारायणले भन्ने गर्थे- “साथी महाप्रबन्धक भयो भन्दैमा बिहान १० बजे हाजीर बजाएर गायब हुने अनि एकै पटक हप्तौँपछि टुप्लुक्क देखा पर्ने, यो त भएन नि !”
यी महान् गायकहरुमा पछि यति तीतो बढ्यो कि एकअर्काको नामसमेत सुन्न चाहदैनथे ।
नारायणगोपाल नाचघरका एक पालेलाई लिएर साँझसाँझ पिउन बस्थे र सोध्थे- “ए भन्त, माणिकरत्न ठूलो गायक कि म ।”
“कहाँ मलद्वार कहाँ हरिद्वार ! यस्तो पनि तुलना हुन्छ ? गाउन त माणिकरत्न तपाईँभन्दा कहाँ हो कहाँ राम्रो नि !” पालेको र्सकाउने उत्तर हुन्थ्यो र नारायणले उसलाई परसम्म खेद्थे ।
यसभन्दा अघि तारादेवीसँग पनि नराम्रो झगडा परेको थियो । उनीहरुले कैयौँ गीत एकअर्कासँग नबोलीनबोली नै गाएका छन् । “ए कान्छा ठट्टैमा…” गाउँदा पनि यी दुइबीच बोलीचाली थिएन । तारादेवीलाई पछिसम्म पनि नारायणगोपालसँग अन्तिम अवस्थासम्म बोलचाल हुन नपाएकोमा ठूलो खेद थियो । दुवैबीच बिना कुनै ठूलो कारण बोलचाल बन्द भएको थियो र कसैले पनि त्यो बोलचाल खोल्न चासो देखाएनन् ।
खानमा कति शौखिन थिए भने, उनलाई डाक्टरले गुलियो पदार्थ खान प्रतिबन्ध लगाइसकेका थिए । न्युरोड आउने काम पर्ने बित्तिकै मोटरसाइकलमा पेमालालाई परै राखेर आधा किलो गुँदपाक एकै बुजोमा सिध्याएर मात्र घरतिर लाग्थे ।
लोकप्रियताको शिखर चुम्न थालेपछि भने नारायण केही अभ्याक्रामी (एग्रेसिभ) हुन थालेका थिए । पहलमान शरीर र पहलमानी सिकेका कारण पनि कसैलाई त उनी चुट्नसम्म अघि र्सर्थे । त्यसैले साथीहरुबीच उनी ‘असनको साँढे’ उपनामबाट पनि परिचित थिए । विशेष गरी साँझतिर केही पिइसकेपछि उनमा यो भावना बढी जाग्दथ्यो । बाहिर उनले यति पिउँथे कि आजीत भएर पेमालाले घरमा नै जाँड बनाउन शुरु गरेकी थिइन्, ताकि नारायण बाहिरतिर गएर नखाऊन्, खाए पनि आफ्नै अघिल्तिर खाऊन् ।
उनी चूरोट यत्ति पिउँथे कि एक दिनमा ४० वटा चूरोट सकिन्थ्यो । पछि विरामी पर्न थालेपछि रक्सी छाडे पनि दिनमा २५ वटा चूरोट त आहार हुन्थ्यो नै !
नारायणलाई खाना तात्तातो खानु पर्दथ्यो । तात्तातो खाना खाएर पसिनापसिना हुनु उनको अर्को शोख थियो ।
नारायणगोपालको कुनै पनि सन्तान भएनन् । किनभने पहिलो पटक पेमाला गर्भवती हुँदा पहिलो बच्चा पाठेघरको देब्रेतिर हुर्कन थाल्यो । जबकि बच्चा बच्चादानीमा हुर्कनु पर्ने थियो । अप्रेसन गरेर बच्चालाई फ्याल्नु पर्दथ्यो । “मलाई पेमालाभन्दा बच्चा प्यारो छैन”, भनेर उनले बच्चा फ्याले र यसपछि उनीहरु जीवनभर सन्तानविहीन बन्नु पर्यो ।
नारायणगोपाललाई अभिनयको शोख थियो भने उनी आफ्ना मनपर्दा साथीसँग भेट हुँदा शुरुमा आँखा झिम्क्याउँथे । नारायणगोपाल ईर्ष्यालु यदि कोहीसँग थिए भने प्रेमध्वज प्रधानसँग थिए । उनले फागुन १३ गते, २०४० सालको गोरखापत्रमा दिएको अन्तरवार्तामा त्यो कुरा व्यक्त गरेका छन् ।
२०४७ साल कात्तिक १८ गते वीर अस्पतालमा रोगले च्यापेपछि भर्ना भएका नारायणगोपालको मृत्युको कारण चाहिँ उनको मुख नै रहन गयो । डाक्टरले खान प्रतिबन्ध लगाएका भोजनहरु पनि उनी साथीहरुसँग झगडा गरीगरी खाइदिन्थे ।
उनको मृत्यु २०४७ साल मंसीर १९ गते वीर अस्पतालमा हुन पुग्यो । उनको मृत्युमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहलगायत थुप्रै राजनेता, कलाकर्मीहरुको उपस्थिति थियो । र, उनको लाश जलाउने बेलामा जति जनताहरु उपस्थित थिए, त्यो उपस्थिति कुनै कलाकारको मृत्युमा भएको उपस्थितिको एउटा रेकर्ड थियो । अनुमान अनुसार १० हजारभन्दा बढी श्रोता उनलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न आर्यघाट पुगेका थिए ।
जीवनभर लगभग ५०० गीत गाएका नारायण गोपालको जीवनकालमा भने जम्मा दुइ वटा गीति एल्बम मात्र बजारमा आए- रत्न रेकर्डिङ संस्थानबाट ‘ब्लु नोट’ र म्युजिक नेपालबाट ‘गीति यात्रा भाग-१’ ।
२०२३ साल सर्वोत्तम सङ्गीतकार, रेडियो नेपाल
२०२४ साल सर्वोत्तम गायक, रेडियो नेपाल
२०२९ साल रत्न रेकर्ड पुरस्कार – एल्बम ‘ब्लु नोट’ का लागि, रत्न रेकर्डिङ संस्थान
२०३३ साल गोदबा चौथो
२०४० साल इन्द्र राज्य लक्ष्मी प्रज्ञा पुरस्कार, ने.रा.प्र.प्र.
२०४४ साल छिन्नलता पुरस्कार
२०४५ साल जगदम्बा श्री पुरस्कार, मदन पुरस्कार गुठी
२०४७ साल त्रिशक्ति पट्ट, तेस्रो